गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन कति कठिन ? - Sankalpa Khabar
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन कति कठिन ?
२७ जेष्ठ १८:४२
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिन नसकेसँगै उनको नेतृत्वको सरकार ढल्यो । गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको विपक्षी गठबन्धनले अब नयाँ सरकार गठन गर्नेछ ।
भोलि शुक्रबारदेखि प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन प्रकृया अघि बढ्छ । विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट पोखरेलले सरकार गठनको दाबी गर्ने छन् । कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ (सभामुखबाहेक), जनता समाजवादी पार्टीका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ गरी ३० सांसद पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन तयार छन् ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ५९ सांसद छन् । गठबन्धनसँग ३० सांसद मात्र छन् । सरकार गठन भएपछि विश्वासको मत लिन उनीहरुलाई ३१ सांसद चाहिन्छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि बिहीबारको मतदानमा देखा नपरेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को साथ अनिवार्यजस्तै छ ।
नयाँ गठन भएको सरकारले यदि विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार प्रदेशसभा भंग हुनेछ र गण्डकी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा हुनेछ ।
संसदको पूरा कार्यकाल जोगाउन नयाँ सरकारले मनाङलाई साथमा लिन अनिवार्य छ । मनाङलाई साथमा लिएर सरकार गठन गर्दा आम जनतामा कस्तो म्यासेज जान्छ त्यसबारे सजग हुन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।